Creative Writing » မျက်စိမှိတ်၍ မုန့်ဝယ်စားခြင်း	27
Posted by surmi on Apr 29, 2015 in Creative Writing | 27 comments
## မျက်စိမှိတ်၍ မုန့်ဝယ်စားပါ ## “” ဟိုက်ရှ် …… ဟိုက်ရှ် !!! “” မောင်ဆာမိ တစ်ယောက် အသံထွက်မတတ် မျက်လုံးပြူးသွားသည် ။
သုံးလေးဇွန်းမျှ ဖလူး ဖလူးနှင့် ခေါင်းငုံ့ ဆြွဲ့ပီးနောက် ဝမ်းအတော်ငြိမ်သွားမှ ဘေးသို့ အကဲခတ်လိုက်မိလေသည် ။
တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ ထင့် ?? သို့နှင့် ကိုယ့်ရင်ဘတ်ကိုယ်ငုံကြည့်လိုက်သည် ။
ခက်တော့ ခက်နေလေပြီ ။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော သွားကြားတစ်နေရာရာ၌ ငရုပ်သီးဖတ်များ ကပ်နေလေရော့သလားးးး ?? ကိုင်းးး လာလေ့ !! လျှာကို ရှေ့သွားများတဝိုက် အမှိုက်သိမ်းစေခြင်းငှါ လှုပ်ရှားလိုက်သည် ။
မာတုဂါမလေး၏ လက်များလှုပ်ရှားလာ၏ ။ ပထမဦးစွာစားပွဲပေါ်မှ ပလပ်စတစ်ဗူးထဲတွင်ထည့်ထားသော ဇွန်းတစ်ချောင်းကိုယူပြီးလျှင် တစ်ရှူးဖြင့်သုတ်သည် ။
ဤသ်ြုိ့ဖင့် ကျေနပ်သည်ကထိ သုတ်ပွဲ သဘင်ကျင်းပပြီးနောက် ဇွန်းအားညင်သာစွာကိုင်ပြီးလျှင် အထက်အောက်သမအောင်မွှေပါတော့သည် ။ ထို့နောက် မုန့်ဟင်းခါးဖတ်များအား ညင်သာစွာကော်ခတ်ပြီးလျှင် နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားသို့ သင်္ဂြိုခြင်းအမှုကိုပြုသောအားဖြင့် သုံးဆောင်လေတော့သည် ။
သြော် ……… ဂလိုကိုးးး မောင်ဆာမိ သိလိုက်ပါပြီ ။ မောင်ဆာမိအား ကက်ရဲ့သောအကြည့် ရှုံ့ချသောအကြည့် တို့ဖြင့် အသံတိတ်ဝေဖန်နေသည်မှာ ဤသို့သောကြောင့်ဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။
ကိုယ်နှင့်မတူသူအားလုံးအား ရှုံ့ချကက်ရဲ့မည် ဆိုပါလျှင် ……??????? လေးစားလျှက် မောင်ဆာမိ About surmi
တောင်ပေါ်သား says: မှန်သဗျာ
တချို့က အဲသလိုလုပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဟုတ်လှပြီမှတ်နေတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: မှတ်မိသေးတယ်။ မြို့ထဲက မုန့်ဟင်းခါးဆိုင်အကြီးကြီး ဟင်းရည်မွှေနေတုန်း မွှေတဲ့သူက အနောက်လှည့်ပြီး နှပ်ညှစ်ပေမယ့် ညျစ်တဲ့နှပ်က ဟင်းအိုးထဲရောက်သွားကို မြင်လိုက်ရတာ နှပ်ဖတ်လေးက ဟင်းရည်ပေါ်မှာဝေ့လို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: အွန်.. အဲဒါ အနော့်အကြောင်းများလားဟင်င်င်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သများလည်း မနက်က လမ်းဘေးဆိုင်မှာ လေပန်း မျက်စိကစားပြီး စားချင်နေလို့ ပြောမိသေးတယ်။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: ပထမဆုံး ဥဥဆာရဲ့ စားပုံတော် ဖွင့်ခန်းကို သဘောကျဒဗျာ …
Mr. MarGa says: ဗိုက်ထဲရောက်သွားဖို့ပဲ ခေါင်းထဲထားတယ်
Ma Ma says: တခါတလေတော့လည်း မာတုဂါမလေးလို စားတယ်။
တခါတလေတော့လည်း ကိုဆာမိလို စားတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
kai says: အသက်ဥာဏ်စောင့်… တဲ့…
Alinn Z says: ဟိုက်… ဒါ ဦးဆာမိပါနော်… အရေးအသား လေသံကတော့ ဦးဆာမှ ဦးဆာပါပဲ… မတွေ့တာ ကြာလို့… အရင်ကတော့ ကျနော်လည်း အဲ့ဒီတယောက်လိုပဲ…
စားချင်စိတ် ပေါက်လာရင် ကြုံရာဆိုင်မှာ ကြုံသလို ဝင် တီးမိနေတယ်… တတ်နိုင်သမျှတော့… ရောင်းချသူ မသန့်တဲ့ ဆိုင်ကို မစားမိအောင်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ရွာထဲမှာ အန်ကယ်ဆာ ပျောက်နေသလိုပဲ။ ခုပြန်ဝင်လာတော့ ရွာပြန်စည်တော့မှာပေါ့။ မုန့်ဟင်းခါးကတော့ ဘာပြောရမလဲ မသိ။ မုန့်ဟင်းခါးကို အသာထား။ ဖတ်ရတာ အရမ်းရယ်ရတာပဲ။
မြစပဲရိုး says: ဪ ဆာဆာ ရယ်
အစားသောင်းကျန်းသူ လူစိမ်းကားကြီး ရဲ့။ jk မတူတဲ့ ဘက်က ပြောရရင်
twitty says: ဘီပိုးတွေ ပြန့်နှံ့လာတာနဲ့အမျှ လူတကာသောက်ကြ စားကြတဲ့ ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်တို့ ဇွန်းတို့ကို တစ်သျူးလေးတွေနဲ့ သုတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်လေးတွေ ခေတ်စားလာကြပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့လူနေမှုဘဝကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ လူအချို့ကလည်း ဆီနဲ့ အချို အငန်တွေ လျှော့စားလာကြပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့ အလေ့အကျင့်တခုပါ။ တချို့ဆို ဆီနဲ့ကြော်တဲ့မုန့်တွေစားရင် တစ်သျူးလေးနဲ့ ဆီစုပ်ပြီးမှ စားပါတယ်။ ။ ပိုလွန်းတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကာကွယ်တဲ့သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။
twitty says: သဘောကျမိတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေး…
manawphyulay says: ဒါများ ဦးဦးဆာမိရယ် မျက်စိမှိတ်ပြီး စားနေရသေးတယ်။ မစားပဲ ထပြန်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1848
nozomi says: လူတစ်ယောက်ကြောင့် ကျနော့် ရဲ့
surmi says: မနေ့ညက အစ်မမျှစ်ကြော် (အစ်မဝင့်ပြုံးမြင့် ) နဲ့ မုန့်ဟင်းခါးအကြောင်းပြောမိတော့မှ
အဲ …… နေ့လယ်ပိုင်း စားတော့လည်းဒီမုန့်ဖတ်ပါဘဲ ။ ဆိုတော့ …… အချဉ်ပေါက်အောင် မုန့်နှစ်ကိုဖေါက်ပြီးမှ လုပ်တဲ့မုန့်ဖတ်ဟာ ပြုတ်အိုးကအထွက် ရေများများဆေးခဲ့ရင်တောင်မှ မုန့်ဖိုထဲက ပတ်ဝန်းကျင် အချဉ်ပေါက်နေတဲ့ နေရာမှာနေခဲ့ရတာရယ် ပြီးတော့ …
စားပြီးသားပန်းကန်တွေရေပြောင်အောင်ဆေးရဲ့လား ?? တစ်ခါက စစ်တမ်းတခုမှဖတ်ဖူးတာတော့ စားသောက်ကုန် စစ်ဆေးရေးက ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ မုန့်ဖတ်တွေမှာ ရောဂါပ်ုိးအများစုတွေ့ရတယ်လို့ဖတ်ဖုးပါတယ် ။
မုန့်ဟင်းခါးဖိုတွေအကြောင်းနဲ့ ချဉ်ရည်ဖျော်ကြပုံ ကို နောက်မှပို့စ်သပ်သပ် တင်ပါ့မယ် အားလုံး အားပေးဖတ်ရှုကွန်မန့်ပေးကြသူများက်ို အထူးကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း …… လေးစားလျက်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မုန့်ဟင်းခါး ကိစ္စကြီးကတော့လေ တိုင်းပြည့်မျက်နှာ အိုးမဲသုတ်နေသလိုပဲ။ တကယ်ပြောတာပါ။ ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းလည်း မသိကြဘူး။ ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေကတော့ သေကောင်ပေါင်းလဲ ကိုဖြစ်ရတာ။ သိတဲ့လူက ပြောမှ သိမှာ။ မျှစ်တို့လည်း ဘာမှမသိဘူး။ သိတဲ့လူက မီဒီယာမှာ တင်ပေးမှ။ ဒါအရေးကြီးတယ်။ ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ သေသေချာချာ ရေးပြီး တင်နိုင်ရင် ပိုတောင်ကောင်းဦးမယ်။ တခါကလည်း တိုင်ပေ ကအသိတစ်ယောက် အဲလိုပဲ မုန့်ဟင်းခါး မွှေးရနံ့ မခံနိုင်လို့ စားမိတယ်။ ထိုင်းလေဆိပ် အရောက်မှာတင် ဆေးရုံတန်းတင် လိုက်ရတာပဲ။ တကယ်လို့များ ဧရာမ လူကြီးလူကောင်းတွေ ခံရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ သက်ကြီးရွယ်အို တွေ ထိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
naywoon ni says: အဲ့သဟာ​ကြောင့်​ အ​ခြေခံ လူတန်းစားကို ​စောင်းငဲ့ကြည့်​မဲ့ အစိုးရတစ်​ရပ်​ အ​ရေးတကြီးလိုအပ်​​နေတာ​ပေါ့ !
padonmar says: ကျမကတော့ ကိုယ်တယောက်တည်း စားနေတာကို သူများ မြင်မှာ ရှက်တတ်လို့ လေးဘန်းဆိုင် တယောက်တည်း မထိုင်ဖြစ်တတ်ဘူး။ပါဆယ်လေး ၀ယ်လာပြီးမှ စားတတ်တယ်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: မှန်လုံခန်းမှာတောင်ရေသေချာမဆေးလို့ ဟိုတလောလေးပဲ ပြသနာတက်သွားပါကောလား အူးဆာရဲ့။ မြန်မာပြည်မှာလူဖြစ်နေသမျှအကုန်လုံးကို မျက်စိမှိတ်ထားလိုက်တာပဲအေးပါတယ်လေ
Crystalline says: ဟုတ်​ပါတယ်​… နာမည်​ကြီး​ဟော့​ပေါ့ဆိုင်​… ကားရပ်​တဲ့ဖက်​​လျောက်​သွားရင်း… တံခါးခနအလှပ်​ စားဖိုခန်းမြင်​ကွင်း​တွေ့​တော့… အငမ်းမရစားခဲ့တာ​တွေ​တောင်​.. ပြန်​ထွက်​ချင်​… အပူ​ပေးပြီးမှစားခဲ့တာပဲဆိုပြီးစိတ်​ပြန်​​ဖြေရ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1294
uncle gyi says: အကောင်းဆုံးကစိတ်မသန့်ရင်မစားတာအကော်င်ဆုံး
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မုန့်ဟင်းခါး ကိစ္စမှာ သဘောထား ၂မျိုးကွဲနေပါတယ်။ တစ်မျိုးက ဘီပိုးလိုမျိုး၊ သို့မဟုတ် ဇွန်းတို့ နံနံပင်တို့ ပဲသီး တို့က ဖြစ်တဲ့ရောဂါ ။ အဲဒါက ချက်ချင်းကြီးဖြစ်မလား။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .သြော် ဘဖောရယ် အဲဒါက ၀တ္ထု သဘောမျိုး အဆာထည့်ပြီး ရေးထားတာပါ။ ဒါမျိုးက ရေးလို့ရတယ်လေ။ creativity ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ရေးလို့ရတယ်။ အားလုံးကို တကယ့် အရှိတရားကြီးအနေနဲ့ တွေးရတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ သူပြောချင်တာက အဲမိန်းကလေး ကိစ္စ မဟုတ်ဘူး။ သရော်စာသဘောမျိုးပါ။ အဲသရော်စာထဲမှာ အမှန်တရားကြီးက ရှိနေတာ။
Mike says: .twitty ပေးထားတဲ့ကွန်မန့်လေးသဘောကျသဗျ…
ရွှေမိုးတိမ် says: မွင်းဂါးတောင်စားချင်လာဘီ :P